Splot, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Splot, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Raha vantany vao lasa ny Noely dia miverina amin'ny enta-mavesatra isika mba hampisehoana lalao iray hafa fa afaka mandefa fotoana maimaim-poana isika mandritra ny fotoana voafetra. Slot, dia lalao an-tsehatra iray izay vahiny mahery vaika sy mahatsikaiky ilay mpihetsiketsika izay tonga teny amin'ny fidirana vonjy maika amin'ny planeta hafahafa izay tsy maintsy hanombohany ny iraka hanavotana ny mponina ao amin'ny Baby Chicks amin'ny fandrahonana mahatsiravina: vahoaka marobe noana ary ny Lamesa Mpanjaka. Slot dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy izay asehoko anao amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Ity lalao an-tserasera ity dia manolotra ambaratonga 56 samihafa zaraina amin'ny tontolo fito samy hafa, sarotra kokoa ny tsirairay, izay tsy maintsy handrosoanay amin'ny fitsambikinana, famoahana, hialana ireo sakana mampidi-doza ... ary koa rehefa mandroso amin'ny ambaratonga isika, mitombo ny fahaizantsika rehefa dia ny fahasahiranan'ny lalao. Nadika amin'ny fiteny espaniola tanteraka ny slot ary mitaky farafaharatsiny mba hiasa ny iOS 6.1.3.
1 Endri-javatra Splot
2 Fepetra takiana
Alao ny mpanjaka adina noana ary avoty ireo zazakely zaza efa ho lany tamingana.
Fanaraha-maso mikasika ny revolisionera amin'ny fomba mahavariana; Mitsambikimbikina miaraka amin'ireo sakana mampidi-doza: spikes, lava, laser, vavahady ary maro hafa.
Ampitomboy ary ampitomboy ny fahaizanao amin'ny fanavaozana mahery vaika toy ny Magnet, Freeze, ary Void.
Angony ny sombin-javatra avy amin'ny azo antoka ary mamoha Splot 150 hafa.
Miteteza tontolo 7 samy hafa: ala Fairy milamina, Station Space mamitaka, Castle Enchanted mampatahotra ary maro hafa ho hitanao.
Mandehana amin'ny ambaratonga mahavariana 56 miaraka amina hakingana telo izay hametraka ny fahaizanao rehetra.
Raha te hankafy Splot dia mila 350 MB farafaharatsiny maimaim-poana amin'ny fitaovantsika. Splot dia tohanan'ny iOS. 6.1.3 ary afaka milalao mivantana avy amin'ny iPhone, iPad na iPod touch isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Splot, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Lalao sy fampiharana 8 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (26 Desambra)
NoLocation, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra